Kaydka Sawirada – Page 2 – Shabakadda Amiirnuur
Kaydka Sawirada Uncategorized Wararka Gudaha
Kuunya Barrow Oo si Qurux badan Loogu Ciiday.(Sawirro)
Deegaanka Kuunya barrow oo gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa looga ciiday si wanaagsan, iyadoona boqollaal kamid ah dadka deegaanka ay isugu soo baxeen fagaaraha Sayid Muxamad Cabdulle Xassan. Qeybaha kala duwan ee bulshada, waxgaradka iyo culimada ayaa ka dhex muuqday dadka salaadda Ciida tukanayay, waxaana musallaha uu ahaa mid aad […]
Sawirro: Saakow oo Si Heer Sare Ah Looga Ciiday.
Degmada Saakow ee wilaayada Jubooyinka iyo degaanada hoos yimaada waxaa maanta looga ciiday si aad u heer sarreysa iyadoo dad weynuhu ay ku dukadeen fagaarayaal waaweyn islamarkaana muujiyeen shacaa’irta islaamka. Ka hor inta aysan salaadda billaaban wadooyinka magaalada ayaa ahaa kuwa mashquul badan, meel walbana waxaa laga maqlayay dhawaqa Takbiirta. […]
Sawirro: Tartanka Qur’aanka Wilaayada Galguduud oo lasoo gaba gabeeyay.
Magaalada Ceelbuur ee gobolka Galguduud waxaa lagusoo gunaanaday tartanka Qur’aanka ee bisha barakaysan ee Ramadaan. Tartankan oo ay ka qeyb gelayaan dadka waaweyn iyo carruurta ayaa lagu tartamayay 30-ka Juz ee Qur’aanka Kariimka. Munaasabad lagusoo gunaanadayay tartanka oo lagu qabtay masjid Jaamaca Ceelbuur waxaa kasoo qeyb galeen mas’uuliyiin katirsan wilaayada […]
Kaydka Sawirada Wararka Gudaha
Diyaaradaha duuliye la’aanta (Drone) ee dowladda Mareykanka ayaa Labo maalin ka hor waxay duqeyn arxan daro ah ka geysteen degmada Jilib ee xarunta gobolka Jubbada dhexe.Duqeyntaas wuxuu Mareykanka ku dilay Saddex ruux oo isugu jira Labo rag ah iyo qof dumar, Sidoo kale duqeyntaan waxaa ku dhaawacmay wiil Afar Sano […]
Sawirro: Maraykanka Oo 4 Qof oo shacab ah ku dilay Jannaale.
Gelinkii dambe ee maalintii shalay diyaaradaha Maraykanka ayaa duqeyn ku dilay afar qof oo shacab ah, kuwaas oo ku safrayay gaari nooca Homeyda ah. Sawirro goobta ay duqeynta ka dhacday laga soo qaaday ayaa muujinaya dad gantaalka ay soo riday diyaaradda Maraykanka ah uu si adag u haleeley, islamarkaana hillbaha […]
Sawirro: Al-Shabaab oo Soo Bandhigay Jabkii Ciidanka DFS Ku Gaaray Ceelsaliini.
Xafiiska Warfaafinta Xarakada Al-Shabaab ayaa soo bandhigay sawirro muujinaya qeyb kamid ah khasaarihii lixaadka lahaa ee ciidamada Maamulka Farmaajo kasoo gaaray weerarkii laba maalin ka hor ka dhacay saldhigga ciidamada ee Ceel Saliini. Sawirrada oo qeyb kamid ah lasoo gaarsiiyay Shabakada Wararka SomaliMeMo ayaa waxaa ay muujinayaan ciidamada Al-Shabaab oo […]
Munaasabad aad u ballaaran oo ka dhacday degmada Cee dheer ee wilaayada islaamiga ee Galgaduud ayaa beesha Wacaysle oo kamid ah Abgaal waxay ku dooratay suldaan cusub oo ku hogaamiya ku dhaqanka Shareecada Islaamka. Xaflada lagu dooranayay Suldaanka oo ay kasoo qeybgaleen masuuliyiin katirsan wilaayaadka islaamiga, Nabadoonno iyo waxgarad ayaa […]
Sawirro: Beesha Habas-Guul Ee Jubooyin oo Ugaas Cusub Ku Caleema Saaratay Bu’aale.
Beesha Habas-Guul oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa Ugaas cusub ku caleema saaratay magaalada Bu’aale ee Wilaayada Jubooyinka. Ugaas Maxamad Ugaas Axmad Shide ayaa loo caleema saaray inuu hogaan diineed u noqdo beesha qeybteeda degta Jubooyinka. Munaasabadda waxaa ka qeyb galay mas’uuliyiin, odayaal dhaqameedyo iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. Mas’uuliyiintii […]
Sawirro: Al-Shabaab oo Gacanta Ku Dhigay Diyaarad Drone Ah oo Kusoo Dhacday Sh/Hoose.
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa gacanta ku dhigtay diyaarad Drone ah, gaar ahaan ah kuwa wax basaasa, kadib markii ay kusoo dhacday degaanka Tooratoorow ee gobolka Shabeelaha Hoose. Diyaaraddan oo maalmihii lasoo dhaafayba ku dul wareegeysay bulshada ku dhaqan degaanka ayaa mar qura laga war helay soo dhicitaankeeda, waxaana isku gadaamay […]
Sawirro: Askar Kasoo Goosatay DF oo Lagu Soo Bandhigay Jubooyinka.
Wilaayada islaamiga ah ee Jubooyinka ayaa saxaafadda usoo bandhigtay askar kasoo goosatay DFS iyo Jubbaland, gaar ahaan kuwooda ku sugan degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Tirada askartan waa 3, laakin arrinta xusidda mudan ayaa waxay tahay habka lagu askareeyay iyo sababta ku dhalisay iney isaga baxaan oo ay ka dhuuntaan. […]